Warshadda waxtarka leh ee Hollywood - Soosaarayaasha wax aan waxba tarayn Hollywood Hollywood, Alaab-qeybiyeyaal
Faan-fiiqnaanta Hollywood YF-D-1
Ku adkee aaggaaga waxtarka leh Natalie-ka sarreeya! Kuu soo bandhigayaa armaajo shaashad si aad u soo bandhigto qalabkaaga waxtarka u fiican. The Natalie waxaa lagu qalabeeyaa laba khaanad waaweyn oo lagu muujiyey Knobs-ka Crystal Lux Drawer Knobs ee Impressions Vanity. Wuxuu la yimaadaa qaybta anti-tipping oo laga yaabo in lagu rakibo xaga dambe ee nabadgelyadaada. Boolal iyo dowels derbiga caag ah ayaa lagu daray sii kordhaya!
Faan-fiiqnaanta Hollywood YF-C-1
Cutubyada Kaydinta Faan-gooska ah ee loogu talagalay jaan-gooyadaas quruxda badan! Qurxoon haddii aad jeceshahay inaad u yeelato sidii mid keli-keli ah oo adag oo lagu taageerayo Miiskaaga Wax-u-taraafka Faan-doonka ah. Waxay kuxirantahay khaanadaha jilicsan-dhow ee lagu muujiyey kuuskeena khaanadda raaxada leh.
YF-HY-5 5 khaanado
5 khaanadaha Hollywood Vanity Mirror oo leh Bulbs iyo Desk Set Black Isagoo wax ka qabanaya dhibaatooyinka boos ee ku yaal aqalkaaga yar? Weligaa waligaa ma rabtay koone kuu gaar ah? Ma u baahan tahay meel badan oo aad ku kaydiso waxyaabaha la isku qurxiyo, cadarkaaga
YF-HY-4 8 khaanado
8 khaanadaha Hollywood Vanity Mirror oo leh Bulbs iyo Desk Set Black Tani Hollywood Glam Set waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay iyo in ka badan.
YF-HY-3 3 khaanado
Si qurux badan loo sameeyay, muraayadayada ugu iibinta wanaagsan waxay leedahay saldhig ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo ay ku qurxiso miiskaaga wax aan waxba tarayn, ama ku hagaajiso darbigaaga oo aad u eegto markasta oo aad qolka gasho
YF-HY-2 11 khaanado aan muraayad lahayn
Maalmahan, miisaska wax aan waxba tarayn ayaa ku tartamaya alaabada guryaha ee qiimaha sare leh ee ku saabsan qiimaha. Qofna ka hor istaagi maayo mid ka mid ah inuu helo haddii aad awood u leedahay inaad ku bixiso wax aan macno lahayn oo la isku qurxiyo. Haddii ay dhacdo inaad hadda raadineyso wax aan waxba tarayn, waxaan ku faraxsanahay inaan muujiyo laba ikhtiyaar.
YF-HY-1 13 khaanadaha
Qoraal kama dambaysta ah oo xarrago la'aani ku dheehan tahay, oo ka kooban muuqaalkeenna gaarka ah ee loo yaqaan 'Hollywood Frame' oo ah mid gaar ah, aad u qurux badan, iyo naqshad casri ah ayaa soo saaraysa summad cusub oo Hollywood soo jiidasho iyo casriyeyn fudud leh oo ka dhigtay kuwa jecel qurxinta, qurxinta iyo balooglayaasha quruxda badan. Ku soo biir kumanaan milkiilayaal farxad leh una oggolow nolol maalmeedkaaga!